Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Toeran-kaleha vaovao any Disney Cruise Line amin'ny 2023
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Cruising
Amin'ny fiandohan'ny taona 2023, hiverina any amin'ny toerana avo tropikaly any Bahamas ny Disney Cruise Line - ao anatin'izany ny nosy tsy miankina Disney, Castaway Cay - ary koa ny Caribbean sy ny Riviera Meksikana, izay faly amin'ireo vahiny amin'ny taona rehetra miaraka amin'ny fialantsasatra tokana amin'ny ranomasina. Ny karazana zotra fitsangatsanganana mahafinaritra dia hanamorona ny morontsiraka-to-morontsiraka avy any Etazonia izay ahitana an'i Miami sy Port Canaveral, Florida; New Orleans; Galveston, Texas; ary San Diego.
Disney Cruise Line dia hamorona fahafinaretana bebe kokoa amin'ny masoandro tsy mbola nisy toy izany tamin'ny alàlan'ny fivoahana avy any amin'ny Sunshine State tamin'ny fiandohan'ny 2023, mitsidika ireo toerana tropikaly manerana an'i Bahamas sy Karaiba. Sambo roa no handeha sambo avy any Port Canaveral any akaikin'i Orlando, Florida, ary ny sambo fahatelo kosa hiala ao Miami. Ny sambo fitsangatsanganana rehetra avy any Florida dia misy ny fitsidihana ny oasis nosy tsy miankina Disney, Castaway Cay.
Miala avy any Port Canaveral, ny Disney Wish dia hiondrana an-tsambo amin'ny 2023 miaraka amin'ny diany telo sy efatra alina mankany Nassau, Bahamas ary Castaway Cay. Ny fitsangantsanganana an-tsambo ao amin'ny sambo vaovaon'i Disney dia manambatra fialamboly sy fitantarana vaovao mahafinaritra, miaraka amin'ny serivisy tsy manam-paharoa sy fotoana mahagaga izay tian'ny vahiny rehefa mandeha miaraka amin'i Disney.
Avy any Port Canaveral ihany koa, ny Disney Fantasy dia hanomboka ny taona amin'ny sambo fito alina mankany amin'ny toerana tianao indrindra any Atsinanana sy Karaiba Andrefana. Fanampin'izany, ny dia an-tsambo valo alina tsy manam-paharoa dia misy roa andro any Bermuda tsara tarehy, izay ahafahan'ny vahiny milentika eny amoron-dranomasina mamy amin'ny morontsiraka, mankafy fanatanjahan-tena mampientam-po na mizaha ireo zohin'ny Crystal Caves ambanin'ny tany mahavariana.
Avy any Miami, ny Disney Dream dia hanomboka sambo fitsangatsanganana efatra sy dimy alina mankany amin'ireo toerana misy an'izany Grand Cayman, Nassau, Castaway Cay ary Cozumel, Mexico. Mbola bebe kokoa aza ny fahafinaretana amin'ny nosy manokana dia eny an-tokotanin-tsambo miaraka amina fitsangantsanganana dimy alina manokana izay misy fijanonana roa ao Castaway Cay.
Amin'ny fiainganan'i Florida rehetra, ny vahiny dia afaka mankafy fitsangatsanganana izay manome zavatra ho an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fianakaviana, manambatra ny fitsangatsanganana sy ny fialan-tsasatra any amin'ny toerana tropikaly, ny fanamorana sy ny filan'ny fitsangantsanganana an-dranomasina, ary ny fialamboly ary serivisy Disney andiany lehibe eran'izao tontolo izao. fialan-tsasatra.
Escapes tropikaly avy any Texas sy New Orleans
Amin'ny volana Janoary sy Febroary, ny Disney Magic dia handeha an-tsambo avy any Galveston, Texas, amin'ny diany efatra, dimy, enina ary fito alina amin'ny lalana mankany Bahamas sy Karaiba Andrefana. Ny seranan-tsambo fiantsoana tropikaly amin'ireo sambo ireo dia misy an'i Grand Cayman ary koa Cozumel sy Progreso, Mexico.
Tamin'ny volana febroary sy martsa, ny Disney Magic dia "nidina ny bayou" voalohany nandritra ny vanim-potoana voalohany tany New Orleans. Miala avy eo afovoan'ny The Big Easy, manamorona ny renirano mahery any Mississippi, ny fitsangantsanganana efatra sy dimy ary enina alina dia hiantso ireo toerana tropikaly any Grand Cayman sy Cozumel.
Alohan'ny na aorian'ny fitsangatsanganana an-tsambo ataon'ny Disney dia afaka miditra ao amin'ny Crescent City ny vahiny mba hankafy ny tsiro mampiavaka ny sakafo New Orleans malaza, mifaly amin'ny feon-kira mamy amin'ny mozika jazz malaza eran-tany ary mankasitraka ny fijery sy ny feo manaitra ny aingam-panahy sarimihetsika « Ilay Andriambavy sy sahona. ”
Ny dia lavitra rehetra tamin'ny taona 2023 Disney Magic dia misy roa na telo andro an-dranomasina hankafizanao ireo fialamboly, fialamboly, fialan-tsasatra ary fahatsiarovana tsy manam-petra.
Fitsangatsanganana amin'ny Penina Baja avy any San Diego
Hiverina any West Coast ny Disney Wonder, ary handeha sambo avy any San Diego amin'ny volana aprily sy mey. Ny fitsangantsanganana an-tsambo mankany Baja, Meksika ary ny Riviera meksikana dia hitondra ny vahiny mankeny amoron-dranomasina feno tontolo kolontsaina mamirapiratra, moron-dranomasina mamiratra, fitsangatsanganana an-kalamanjana ary hetsika rano mahafinaritra.
Ny sambo avy any San Diego dia haharitra hatramin'ny telo ka hatramin'ny fito alina. Ny sidina vitsivitsy mankany amin'ny saikinosy Baja dia hiantso ny tanàna amoron-tsiraka manintona an'i ensenada, fantatra amin'ny rano manga turquoise sy ny faritra be tendrombohitra mikitoantoana. Fiaingana maro no ahitana ny fitsidihana an'i Cabo San Lucas, toerana ankafizinao indrindra miaraka amina vatolampy sandoka sy torapasika fasika fotsy.
Fitsangatsanganana fito alina no handeha ho any Mazatlan, ilay "Voahangy Pasifika", feno fahagagana voajanahary mahatalanjona, kolontsaina miroborobo ary tantara maro loko, ary mankany Puerto Vallarta, ilay fitsoahana amoron-dranomasina tsara tarehy izay miorina amin'ny sisin'ny Helodrano Banderas ary eo akaikin'ny tendrombohitra Sierra Madre manaitra.